DAAWO-Puntland oo shaacisay xilliga la xukumayo ragii Caasha Ilyaas loo haystay & doodii ugu adkayd oo xeer ilaalinta & qareenada.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ayaa ku dhawaaqday xilliga rasmig ah ee ay go’aan ka qaadan doonto kiiska marxuumad Caasha Ilyaas Aadan oo la horkeenay. DAAWO Dooddii ugu adkayd ayaa shalay dhexmartay xeer ilaalinta […]
TOOS U DAAWO: Wariye kasoo waramaya Addis Ababa, Xog badana daaha ka rogay
Tan iyo xalay markii uu soo baxay warka sheegaya in Afgambi dhicisoobay uu ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo gobalka Ismaamulka Amxaaradda lana dilay Saraakiil sar sare oo Milateriga ah iyo Madaxweynihii Amxaaradda, waxaa marba […]
Ciidamadii Khayre oo galabta gaarey Dhuusamareeb iyo Xaaf & ciidankiisii oo ka baxay afkana saaray dhanka..
Wararka laga helayo Magalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo goordhow isaga tegay Magaaladaas. Madaxweyne Xaaf ayaan ku qanacsaneyn wadahadallada dhuusamareeb uga socday Wafdiga […]
DAAWO-Xiisad dagaal oo Puntland iyo Galmudug ka dhex taagan iyo Puntland oo ku hanjabtay inay…
Saraakiisha ciidanka Puntland ee ku sugan aagga Towfiiq ayaa hanjabaad u diray maamulka Galmudug waxaana ay sheegeen in haddii aysan joojin daandaansiga ay tallaabo ka qaadi doonaan isla markaana aysan aqbali doonin in dhulkooda lagu […]
XOG-Saraakiil & askartii ugu badnayd oo lagu qaqabtay Galkacyo xabsigana la dhigay iyo sababta.
Puntlanndews.net (Garoowe)-Wararka aanu ka helayno Magalada Gaalkacyo ayaa waxaa ay sheegayaan in Xabsiga la dhigay Saraakiil iyo askar ku lug yeeshay dagaalkii shalay ka dhacay Koonfurta Magalada Gaalkacyo. Dagaalka ayaa markii hore ka bilaawday sida […]
XOG-Kulamadii Dhuusamareeb oo fashilmay xaaf oo looga yeeray Safaaradda Maraykanka & Puntland oo la safatay.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka biya diidey guud ahaanba qorshaha dowladda federalka ah ee Soomaaliya ay ku doonayso inay maamulkaasi doorasho kaga qabato bisha 7aad ee soo socota. Xildhibaano ka socda Baarlamaanka […]
DAAWO-Maxkamadda oo go’aan ka gaartay kiiskii Caasha Ilyaas & 3 xukumane ee racfaanka qaatay oo Maalinta Arbacada La…
Puntlandnews.net (Garoowe)-Kadib markii ay muddo 2 maalmood ah dhegaysanaysay dacwadda kiiskii marxuumad Caasha Ilyaas Aadan waxaa goor dhoweyd maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal war ka soo saartay arrintaasi iyadoona shaacisay in Arbacada laysu imaan doono. DAAWO
BREAKING NEWS-Maxkamadda rafcaanka Nugaal oo hadda ku dhawaaqday in raggii loo haystay Caasha Ilyaas Maalinta Arbacada la..
Puntlandenws.net (Garoowe)-Maxkamadda rafcaanka ee gobolka Nugaal ayaa maanta markale waxa ay dib u dhigtay go’aanka xukunka ragga loohaysto kiiskii marxuumad Caasha Ilyaas Aadan oo Galkacyo lagu diley. Maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal ayaa waxa ay kiiska […]
DEG DEG+DAAWO: Afgambigii Itoobiya oo waji kale lasoo baxay & Wararkii u dambeeyey
Ma sahlana in xog laga helay xaaladdaha kacsan ee Siyaasadda Itoobiya, Xoogag is garanaya mudo dheer soo wada shaqeeyey iyo Jeneraalo sirdoonka dhexdiisa caanka ah ayaa isku baacsanaya Talada dalka, wax kastana wey adkaadeen. HALKAN […]
DEG DEG-Wiil 4 gabdhood ku kufsadeen magaalada Hargaysa oo Maxkamad ka soo muuqday iyo qaabkii ay u farxumeeyeen.
June 23, 2019 puntlandnews 1
Puntlanndews.net (Garoowe)-Maxkamada gobolka maroodi jeex ee magaalada Hargaysa saaka waxa dacwad keensaday nin dhalinyaraa oo sheegay inay 4 dumar ahi ay kufsadeen. Ninkan ayaa maxkamada u sheegay in dumarku todobaadkii lasoo dhaafay ay 12kii habeenimo […]
Dagaal ka socda magaalooyinka waaweyn ee Itoobiya, taliyihii ciidanka iyo madaxweynihii oo la diley & Abiy Ahmed oo ku dhawaaqay.
Ra’isul-wasaaraha Ethiopia, Abiy Ahmed waxa uu goor hore oo saakayto ah sheegay in la fashiliyey Afgembi lala maaganaa Maamul-gobaleedka Amxaaradda ee Waqooyiga magaalladda Addis Abeba. Khudbad uu ka jeediyey TV-ga qaranka waxa uu sheegay inay […]
TOOS-Maxkamadda rafcaanka oo ku dhawaaqaysa go’aanka kiiskii Caasha Ilyaas.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Maxkamadda rafcaanka ee gobolka Nugaal ayaa saaka go’aan ka gaaraysa eedaymaha loo haysto xukumanayaasha dilkii iyo kufsigii Caasha Ilyaas Aadan oo xukunka horay rafcaan uga qaatay. Maxkamadda ayaa shalay daahfurtay wajiga 1aad ee dib […]
Ciidankii ugu badnaa oo Galkacyo lagu diyaariyey iyo dagaal u dhexeeya ciidanka Xaaf & kuwa DFS oo ka bilowday.
Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dagaal u dhexeeyay Ciidamada Daraawiishta dowlad Goboleedka Galmudug iyo kuwa nabadsugida dowladda Soomaaliya oo Maanta ka dhacay gudaha Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug. Dagalkaan ayaa ka […]